Fifamindram-pitantanana MPTDN: Fitohizan- draharaha ary ny fiaraha-miasa no hahatratrarana ny tanjona Fampandrosoana ny Firenena sy tombontsoan’ny vahoaka
Tontosa androany 31 janoary 2020 ny fifamindram-pitantanana teo amin’Andriamatoa Christian RAMAROLAHY, Minisitra teo aloha, sy Andriamatoa Andriamanohisoa RAMAHERIJAONA, Minisitry ny Paositra sy Fifandraisan-davitra sy ny fampiroboroboana ny haitao ara-kajy mirindra vaovao. Fifamindram-pitantanana izay natrehin’ireo tompon’andraikitra isan-tsokajiny sy ireo mpiara-miasa eto amin’ny Ministera sy ny ratsam-mangaika.
Nandritra ny lahateniny dia nampatsiahy ny Ministra teo aloha Christian RAMAROLAHY fa iray ihany no tanjona eto amin’ny Governementa, hiasa ho an’ny Malagasy sy hampandroso ny Firenena Malalagasy. Araka izany, tsy manova ny fampandehanana ny asa ity fanendrena vaovao ity fa hanatsara aza. Ny Ministra nosafidian’ny Filoham-pirenena Andry RAJOELINA dia manana ny traikefa mifanaraka amin’ity Ministera ity. Tombony lehibe izany ho an’ ny mpiasa sy ho an’ny fitohizan’ny asa sy ny Fampandrosoana tiana ho tratrarina.
“Matoky ary mino tanteraka ny tenako fa ny teknolojia vaovao dia afaka mitondra fampandrosoana, fametrahana ny Fitondrana tsara tantana ary koa fivoarana ho an’ny Firenena sy ny Vahoaka Malagasy. Ireo antony ireo sy ny fitiavako ny Tanindrazana no antony nanekeko izao fanendrena izao. Resy lahatra tanteraka ny tenako fa manana fitiavana sy finiavana hampandroso ny Firenena ny Filoham-pirenena, ekeko araka izany ny soritr’asa ankininy amiko izay voarakitra ao anatin’ny Velirano”.
Izany no voalohan-teny nentin’ny Minisitra Andriamanohisoa RAMAHERIJAONA hanamarihana izao famindram-pahefana izao.
Naneho fisaorana sy fankasitrahana ny Minisitra teo aloha, ny tompon’andraikitra isan-tsokajiny ary ireo mpiara-miasa rehetra eto amin’ny Ministera ihany koa ny tenany noho ny asa rehetra vita sy misongadina. Matoa mbola mijoro ny Minisitera dia nisy anareo niasa sy niezaka ho amin’ izany.
Hanentana, hitarika sy hizara traikefa amin’ny rehetra ny Minisitra ho an’ny fampandrosaona sy ny tombontsoa-pirenena ary hanatanteraka ny soritr’asa napetraky ny Filoham-pirenena aminy.
Ao anatin’izany ny fanavaozana ny tolotra mba hitondra sanda ho an’ny Vahoaka. Ho ezahina fanapariahana ny teknolojia vaovao, fampitomboana ny mpanjifa, fanatsarana ny tolotra ary koa fanenanana ny sarany amin’ny fampiasana ireo taknolojia vaovao ireo.
Ilaina ny fifampitokisana sy ny fiaraha-miasa eo amin’ny mpisehatra rehetra eo amin’ny tontolon’ny Fifandraisan-davitra sy ny haitao ara-kajy mirindra tsy an-kanavaka. Ary andraikitry ny Ministera no miasa hahatanteraka izany.
Teo am-pamarana dia notsindriany fa tsy misy fanatsarana vita raha ny Ministera irery no hiasa. Mila mihaino ireo soso-kevitra rehetra mitondra sanda avy amin’ny vahoaka, ny mpisehatra rehetra mba ahafahana mitondra izay fiovana izay. Maro ny zavatra azo atao hoy ny Minisitra saingy tsy ho tratra ny hanatanteraka azy rehetra fa anjarantsika no manao izay azontsika atao mba hitondra sanda ho an’ny Vahoaka Malagasy izany.